IATA: Ndị njem tụkwasịrị obi na nchekwa nchekwa, mkpuchi nkpuchi | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » IATA: Ndị njem tụkwasịrị obi na nchekwa nchekwa, mkpuchi mkpuchi na-akwado
Imirikiti ndị njem ụgbọ elu nwere obi ike banyere nchekwa nke njem ụgbọ elu ma na-akwado mkpuchi nkpuchi na nso nso.
85% nke ndị njem kwenyere na ụgbọ elu na-ehicha ma kpochapụ ya.
65% nke ndị njem kwenyere na ikuku na ụgbọ elu dị ọcha dịka ime ụlọ ọrụ.
89% nke ndị njem kwenyere na a na-etinye usoro nchebe nke ọma.
International Transporttù Na-ahụ Maka Transportgbọelu Air (IATA) kọrọ na ọ dabere na nyocha ndị njem ọhụụ emere na June, ọtụtụ ndị njem ụgbọ elu nwere obi ike banyere nchekwa nke njem ụgbọ elu na nkwado mkpuchi ihu na nso-nso. Otú ọ dị, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-enwekwa nkụda mmụọ na "nsogbu" gburugburu usoro ogbugba ndu COVID-19, gụnyere mgbagwoju anya na enweghị mgbagwoju anya gbasara iwu njem, nyocha nnwale, na oke ule akwụ ụgwọ
Nyocha nke ndị njem 4,700 na ahịa 11 gburugburu ụwa na-egosi na:
85% kwenyere na ụgbọ elu na-ehicha ma kpochaa ya
65% kwenyere na ikuku dị n'ụgbọelu dị ọcha dịka ime ụlọ ọrụ
N'ime ndị njem kemgbe June 2020, 86% chere na ọ dị nchebe n'ụgbọ n'ihi usoro COVID-19:
89% kwenyere na a na-etinye usoro nchebe nke ọma
90% kwenyere na ndị ọrụ ụgbọelu na-arụ ọrụ dị mma nke ịmanye usoro ndị ahụ
Ndị njem na-akwado ihe mkpuchi mkpuchi (83%) na mmanye siri ike nke iwu mkpuchi (86%), mana ọtụtụ kwenyere na ihe nkpuchi achọrọ ga-akwụsị ozugbo enwere ike.
“Ndị njem ụgbọ elu na-amata ma jiri usoro nchekwa etinyebere iji belata ihe egwu nke mgbasa ozi COVID-19 n’oge njem ụgbọelu. Ha na akwado nkwado maka usoro ndị a ogologo oge ọ bụla ọ dị mkpa, mana ha achọghịkwa ka usoro ndị a dịgide. Ka ọ dịgodị, anyị niile kwesịrị ịkwanyere iwu na nchekwa nke ndị njem ibe anyị ùgwù. Ọ bụ ihe a na-adịghị anakwere na ihe ndị njem na-eme n’ụzọ na-adịghị mma amụbaala okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere 2019, mmụba nke omume mkparị bụ ihe kpatara nnukwu nchegbu,